Mukhtaar Roobow oo laga soo saaray xabsigii uu ku jiray Xagee la geeyey? – hareerley News
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) ayaa la sheegay in laga soo saaray xabsiga Xarunta Hay’adda Nabad sugidda Qaranka NISA oo ku yaalla degmada Shibis ee gobolka Banaadir.
Wararka ayaa sheegaya Mukhtaar Roobow la geliyey xabsi guri, lana dejiyay dhisme ku yaala Agagaarka Madaxtooyada Soomaaliya halkaasoo ay ku ilaalin doonaan ciidanka Nabad sugida.
Ehelada Mukhtaar Roobow ayaa horey walaac badan uga muujiyey arintan, iyagoo sheegay in haddii xabsi guri la geliyo laga yaabo iney beegsadaan Xoogaga Al-Shabaab.
Roobow ayaa la sheegay inuu mudooyinkan la ildarnaa xanuuno kala duwan oo haleelay, iyadoo dhowr jeer laga saaray xabsiga, lana dhigay Isbitaal.
Bartamihii bishii Disembar ee sanadkii hore ayaa Mukhtaar Roobow laga soo xiray Magaalada Baydhabo, waxaana xarigiisa ka dambeysay dowlada Somalia oo u adeegsatay ciidamada Itoobiya ka dib markii uu diiday inuu ka laabto Musharaxnimadiisa madaxweynaha Koonfur Galbeed oo dowladu ay si weyn uga soo horjeeday.
Madaxweynaha burkino faso Oo ku baaqey in loo midoobo Argagixisada Caalamka
Madaxweynaha Burkinabe Mr Roch March Kabore ayaa ugu baaqay Muwaadiniinta ku nool gudaha iyo dibada dalkaasi in gacanta ay isqabsadaan si loola dagaalamo kooxaha Argagixisada ee weerarada ka geysanaya dalkan ku yaal qaarada Afrika. Mr Kabore oo qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Twitter-ka ayaa sheegay in dagaalyahanada Islaamiyiinta ay dhibaato ku yihiin Amaanka […]
Maxey ka wada hadleen Madaxweyne Mustafe Cagjar & Safiirka UK?:-(Sawiro)
Madaxweynaha Dowlad deegaanka Soomaalida ee Soomaali State Mustafe Muxumed Cumar ayaa Maanta Xafiiskiisa waxaa uu ku qaabilay Danjiraha ingiriiska u fadhiya Itoobiya Dr. Alastair mcphail oo booqasho ku yimid deegaanka. Safiirka ayaa Madaxweyne Mustafe Cagjar uu kala hadlay sida uu ula dhacsanyahay isbadalada siyaasadeed ee ka socda deegaanka iyo taageero ay siinayaan. Safiirka ingiriiska u […]